Ndị na -emepụta na ndị na -ebubata usoro mwepụ ntutu - ụlọ ọrụ mmepụta ntutu nke China
infrared rf agụụ mpịgharị VSⅢ slimming igwe
Igwe anaghị agba nchara Hydro Dermabrasion Machine
Igwe mkpanaka mkpanaka RF Micro
Mpekere CO2 laser igwe
Nwepụ ntutu ntutu ụmụ nwanyị Soprano Ice Diode Laser Machine Price
Soprano Ice Diode Laser Machine bụ ihe ama ama n'ahịa. Ngwa 808nm diode laser ntutu: Kachasị mma maka iwepụ ntutu ngwa ngwa, enweghị nchebe, enweghị mgbu na -adịgide adịgide na mpaghara dịka ihu, ogwe aka, akpa aka, obi, azụ, bikini, ụkwụ na wdg. Ọ bụkwa Ma ị nwere ọkụ, ọchịchịrị ma ọ bụ akpụkpọ anụ gbara ọchịchịrị, isi ma ọ bụ ntutu dị mma, azịza mwepụ ntutu anyị na-enweta nsonaazụ kacha mma maka akụkụ ahụ niile yana ọgwụgwọ dị nchebe, ngwa ngwa na nke kachasị mma- ọ nweghị ihe mgbu.
808Nm Diode Laser Skin Rejuvenation Beauty Machine bụ nke a nabatara nke ọma.Ihe dị mkpa maka iwepụ ntutu isi laser bụ na iwepụ ntutu nke ọma. Laser nwere ike banye n'ime akwa dermis na anụ ahụ adipose subcutaneous wee rụọ ọrụ na ntutu ntutu dị omimi n'akụkụ dị iche iche iji wepu ntutu miri emi n'akụkụ ọ bụla nke ahụ mmadụ. Ọ gaghị emebi epidermis, nke bụ nnukwu uru nke iwepụ ntutu laser. Mwepụ ntutu laser na -eji ụkpụrụ "mmetụta photothermal na -ahọrọ" nke laser. A na -eji laser nke edoziri ka ogologo ebili mmiri ụfọdụ gafere na epidermis wee kpoo ntutu ntutu ozugbo. Melanin nke ntutu ntutu na ntutu isi na -amịkọrọ ike ọkụ nke ọma, nsonaazụ ọkụ na -esite na -eme necrosis follicle ntutu na ntutu agaghịzi eto. Mwepụ ntutu isi laser bụ nke kacha ebibi ntutu ntutu ma nweta nsonaazụ iwepụ ntutu.
Best Chin Electrolysis Iwepụ ntutu Soprano Ice Platinum Laser Machine Price
Mwepụ ntutu Soprano Ice Platinum Laser Machine bụ ihe ama ama n'ahịa. Ngwa 808nm diode laser ntutu: Nke kachasị mma maka iwepụ ntutu ngwa ngwa, enweghị nchebe, enweghị mgbu na -adịgide adịgide na mpaghara dịka ihu, ogwe aka, akpa aka, obi, azụ, bikini, ụkwụ na wdg. Ọ bụrụkwa na ị nwere ọkụ, gbara ọchịchịrị ma ọ bụ akpụkpọ anụ gbara ọchịchịrị, isi ma ọ bụ ntutu dị mma, azịza mwepụ ntutu anyị na-enweta nsonaazụ kacha mma maka akụkụ ahụ niile yana ọgwụgwọ dị nchebe, ngwa ngwa na kachasị mma- ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghi mgbu.
Soprano Ice Laser Hand na igwe na -ewepu ntutu kacha mma na -akwụ ụgwọ Platinum
Igwe mwepụ ntutu anyị na -eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ removal Diode laser wepụ ntutu bụ teknụzụ mwepụ ntutu kacha dị ugbu a n'ahịa. Uru ya bụ na usoro iwepụ ntutu dị ezigbo mma, enweghị mgbu ọ bụla, yana mmetụta iwepụ ntutu dịkwa oke mkpa.Diolasheer Ice 1200pro nwere aka abụọ. Ndị ahịa nwere ike họrọ aka nke nha na ike dị iche iche dịka mkpa ha si dị iji mee ka ọgwụgwọ nke akụkụ ahụ dị iche iche dị mfe.
Soprano Ice Price Machine bụ igwe kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mere.Iwepụ ntutu isi Diode Laser ugbu a bụ teknụzụ mwepụ ntutu kacha dị elu n'ahịa. Uru ya bụ na usoro iwepụ ntutu dị ezigbo mma, enweghị mgbu ọ bụla, yana mmetụta iwepụ ntutu dịkwa oke mkpa.Diolasheer Ice 1200pro nwere aka abụọ. Ndị ahịa nwere ike họrọ aka nke nha na ike dị iche iche dịka mkpa ha si dị iji mee ka ọgwụgwọ nke akụkụ ahụ dị iche iche dị mfe.
Ahịa ihu kacha mma ụmụ nwanyị N'okpuru ntutu ntutu mwepụ ntutu laser
N'okpuru igwe mwepụ ntutu ntutu laser bụ usoro ahụike nke na -eji nnukwu ọkụ (laser) iji kpochapụ ntutu na -achọghị. N'oge usoro iwepụ ntutu, laser na -ewepụta ọkụ nke ụcha (melanin) na -etinye na ntutu. A na -agbanwe ọkụ a ka ọ bụrụ ike ọkụ, nke na -emebi ntutu ntutu ma n'aka nke ya, na -enyere aka belata uto ntutu. Ọ bụ usoro igbochi ntutu gị ka ọ na -eto site n'ikpughere mgbọrọgwụ ya na oke ọkụ ọkụ laser nke na -emebi ntutu ntutu.
Soprano Ice Laser Light Hair Removal Machine Maka Akwụ Akụrụngwa India
Ime ntutu na -achọghị na -ewepụ kwa izu site na agụba ma ọ bụ ịkpụ ntutu ga -abụ ọrụ siri ike na nhazi ndụ a na -arụsi ọrụ ike. Ezigbo echiche wepụrụ ọrụ a site n'ịga ọgwụgwọ iwepụ ntutu Laser otu ugboro. Ọgwụ mwepụ ntutu Laser dị maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. Ịkwesịrị ịgwọ Soprano Ice Laser Light Machine Removal Machine, ọ gaghị afụ ụfụ ma ọlị.
Ndị na -arụ ọrụ kacha mma ọkachamara laser mwepụ igwe na -efu ọnụ ahịa
Igwe mwepụ ntutu Laser ọkachamara na -anabata 808 nm, ọkachasị dị irè na ntutu ntutu melanocytes na -enweghị mmerụ ahụ gbara ya gburugburu. Ogwe ntutu na ntutu ntutu na melanin nwere ike banye ọkụ ọkụ laser, wee gbanwee ka ọ bụrụ okpomọkụ, si otú a na -abawanye okpomoku ntutu ntutu. Mgbe okpomoku na -ebuli elu nke ukwuu iji mebie usoro nke ntutu isi, nke na -apụ n'anya ka oge nke usoro usoro anụ ahụ nke ntutu isi wee mezuo ebumnuche iwepụ ntutu na -adịgide adịgide.
Soprano Ice Professional Laser Machine kacha mma maka iwepụ ntutu
Igwe Laser kacha mma bụ usoro ahụike nke na -eji ọkụ na -enwu enwu (laser) iji kpochapụ ntutu na -achọghị. N'oge usoro iwepụ ntutu, laser na -ewepụta ọkụ nke ụcha (melanin) na -etinye na ntutu. A na -agbanwe ọkụ a ka ọ bụrụ ike ọkụ, nke na -emebi ntutu ntutu ma n'aka nke ya, na -enyere aka belata uto ntutu. Ọ bụ usoro igbochi ntutu gị ka ọ na -eto site n'ikpughere mgbọrọgwụ ya na oke ọkụ ọkụ laser nke na -emebi ntutu ntutu.
Igwe mwepụ ntutu ihu ọnụahịa ọnụahịa akpụkpọ anụ kacha mma ngwaọrụ mwepụ ntutu
Ngwa mwepụ ntutu kacha mma na -eji oke ọkụ bibie ntutu dị iche iche ma kwụsịkwa ịkpụ ntutu isi ka ọ na -arụkwa ọrụ. Nke a pụtara na ka oge na -aga, ntutu na -apụta nke ọma, ọ ga -ewe ogologo oge maka ntutu ntutu iji mepụta ntutu ọhụrụ. Nke a nwere ike bute ntutu nke nta nke nta n'izu na ọnwa.
Ugboro abụọ ejiri Soprano Ice Laser Machine Iwepụ Igwe na -adịgide adịgide
Igwe na -adịgide adịgide na -ewepụ ntutu anyị Laser na -eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ removal Diode laser iwepụ ntutu bụ teknụzụ mwepụ ntutu kachasị elu ugbu a n'ahịa. Uru ya bụ na usoro iwepụ ntutu dị ezigbo mma, enweghị mgbu ọ bụla, yana mmetụta iwepụ ntutu dịkwa oke mkpa.Diolasheer Ice 1200pro nwere aka abụọ. Ndị ahịa nwere ike họrọ aka nke nha na ike dị iche iche dịka mkpa ha si dị iji mee ka ọgwụgwọ nke akụkụ ahụ dị iche iche dị mfe.
Ọkachamara Laser Mwepụ Salon Machine Igwe eji ewepu ntutu kacha mma maka nwanyị
Igwe ochie enweghị ike ịgwọ ntutu dị oke ncha ma ọ bụ akpụkpọ anụ gbara ọchịchịrị, mana igwe nrụpụta ntutu laser ọkachamara a nwere ike ịdo ntutu na -achọghị n'emebighị ụcha na akpụkpọ ahụ, yabụ nwere ike ịgwọ ụda akpụkpọ ahụ gbara ọchịchịrị. akpụkpọ ahụ gbara ọchịchịrị, mana igwe eji eme ntutu ntutu laser ọkachamara a nwere ike ịdo ntutu isi achọghị na -emerụ ụcha na akpụkpọ ahụ, yabụ nwere ike ịgwọ ụda akpụkpọ ahụ gbara ọchịchịrị.
Ngwa mwepụ ntutu Laser nke na -ebugharị ebugharị Ọkachamara Igwe mwepụ ntutu Laser
Ngwa mwepụ ntutu Laser na -ebugharị ebugharị na -eji ogologo nrịgo nke 810nm site na semiconductor banye n'ime akpụkpọ ahụ wee lekwasị melanin anya na ntutu ntutu. Ike sitere na laser na -ebibi oghere ntutu.Ụdị akpụkpọ anụ na -emeso - Ndị na -ahụ maka akpụkpọ anụ na -eji ya na ụdị akpụkpọ anụ gbara ọchịchịrị maka ibelata ntutu nke ọma.
Ọkachamara kacha mma iji wepu ntutu maka igwe na -ewepụ ntutu ntutu laser dị iche iche
Iwepụ ntutu ntutu laser bụ usoro nke na -eji oke ọkụ elebara anya na -eduzi na agba na ntutu ntutu anyị. Ìhè a na -emepụta okpomọkụ nke na -emebi ntutu isi na bọlbụ ntutu. Igwe mwepụ ntutu laser bụ usoro ịchọ mma nke a na-eme iji wepụ ntutu isi ogologo oge. Ọ na -arụ ọrụ site na iwepu ntutu isi nwa oge ka ọ ghara ịmịpụta ntutu ọhụrụ. Ọ bụ ezie na usoro iwepụ ntutu a anaghị adịgide adịgide, nsonaazụ ọgwụgwọ laser nwere ike ịdịru ọtụtụ izu. Usoro ọgwụgwọ a nwekwara ike ịdị mma maka akụkụ ahụ nke siri ike ịkpụ afụ ọnụ ma ọ bụ wax.Ma, agaghị enwe ike nweta uru iwepụ ntutu laser na -enweghị obere ahụ erughị ala. Ọgwụgwọ nwere ike bụrụ ihe mgbu na -adabere na mpaghara ị na -agwọ, yana ịnagide ihe mgbu gị.
Kacha mma 808 Nm Soprano Ice Diode Alexandrite Laser Face Hair Removal For Women
Igwe mwepụ ntutu isi 808 Nm Soprano Ice Diode Laser nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na ike gwụchara gị, ịkpụcha na ịkpụ afụ ọnụ kwa ụbọchị, ma ọ bụ kwe nkwa na agaghị agabiga ihe mgbu nke ịkpụ ntutu ọzọ. Ihe ga-eme ka otu igwe bụrụ ngwaọrụ kacha mma maka iwepụ ntutu laser n'ụlọ gị dabere n'ụdị ntutu gị, ụcha akpụkpọ ahụ na mpaghara ịchọrọ ịgwọ.